China Drum ụdị ogbugba ogbugba igwe factory na-emepụta |TAA
Uru nke igwe ogbugba ogbugba ogbugba
Teknụzụ mgbawa a pụrụ ịdabere na ya: Igwe ogbugba ogbugba ogbugbaA na-arụpụtara ya n'ụdị dị iche iche, ụdị na nha.Ha dị kọmpat ma nwee naanị obere akara ukwu.Enwere ike nweta nsonaazụ na-aga n'ihu site na ijikọ ọtụtụ igwe.
Nhazi omume enyi na-edozi:Nlekọta anya mgbe niile dị mkpa maka ichekwa uru akụrụngwa dị ogologo oge.Nnukwu ọrụ na ọnụ ụzọ nyocha na-enye ohere dị mfe ịnweta ihe niile dị mkpa.N'ihi ya, e nwere ike dochie akụkụ eyi n'ụzọ dị mfe.
Teknụzụ nzacha ọhụrụ:Sistemụ nzacha ọhụrụ na-amasị nnukwu arụmọrụ.Njirimara njirimara na-adọrọ mmasị karịsịa bụ katrij conical nzacha nke nwere ike dochie ngwa ngwa na ngwa ngwa n'èzí igwe n'ihi slide ha na usoro.Enwere ike ịmegharị sistemụ nzacha ndị a dabere na katrij n'ime igwe gbawara agbawa ochie nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nrụpụta ndị ọzọ niile.
Nhazi siri ike:Nhazi siri ike nke ígwè na-eguzogide ike nke ukwuu nke nwere mkpuchi mgbakwunye nke ebe ekpughere iyi na-akwado onye ọrụ iji chebe ya.itinye ego.
* Ọnụ ọgụgụ nke akụkụ ndị na-eyi akwa ebelatala nke ukwuu (ma e jiri ya tụnyere igwe mgbawa mgbawa ígwè) n'ihi ọdịdị pụrụ iche nke ịgbà ahụ.
* Mfegharị dị nro na ntụgharị nke ịgbà na-enyere aka iji nwayọọ gwọọ akụkụ ahụ.
* Nhazi nke ịgbà na-adabere na akụkụ ndị a ga-agwọ.
Ụdị na nhazi nke mpaghara ala na mgbidi dị n'akụkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị mma nke akụkụ ahụ.
* The perforation nke drum na-ghọtara n'ahịrị na specififi c chọrọ banyere akụkụna abrasive.Nke a na-egbochi mkpọmkpọ ebe, na abrasive nwere ike kacha mma hapụ ya.
* A na-eji igwe ogbugba ogbunigwe eme ihe maka ọgwụgwọ obere akụkụ a na-emepụta.
Igwe ogbugba ogbugba ogbugbadị na nha ọkọlọtọ ndị a:
Nkọwa nka nka TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500
Olu ilu (1)
Turbine na-arụ ọrụ nke ọma (nke ukwu)
Turbine na-arụ ọrụ nke ọma (kW)
7.5 ruo 15 ruo 22 ruo iri atọ
nnyefe abrasive ịghasa ịghasa ịghasa ịghasa
Ikpokoro nlekọta na-enweghị ee ee ee
Ngwa nzacha katrij PF4-06 PF4-06 PF4-09 PF4-12
Mgbakwunye na atụmatụ ndị ọzọ ga-ekwe omume.
Nke gara aga: Egweri wiil FW-09 usoro
Osote: Carbon ígwè ịkpụ waya gbara
Igwe na-agbawa agbawa akpaaka
igwe mgbawa Drum ụdị
Igwe na-agba ọkụ China
Igwe na-agba agba agba agba agba
N'ime igwe na-agba ọkụ Drum Shot
Ngwa akụkụ mapụtara dị Ọdịnaya nke Cr-12%, 20%, 25% ma ọ bụ dị ka arịrịọ.Atụmatụ ngwaahịa dị elu & usoro nkedo nkenke sayensị na teknụzụ.High arụmọrụ na akpaka otu ọdụ ihicha mmepụta akara.Pụrụ iche elu chromium abrasion nkedo ígwè mapụtara akụkụ, na-eme ka oghere na ụlọ ọrụ.Ngwa ngwa arụpụtara (OEM) akụkụ dị.Anyị na-enyekwa ...